Posted by Layma at 10:50 AM 8 comments Links to this post
P.S. အော်... မေ့တော့မလို့ ... ဟန်းနီးမွန်းခရီးကိုတော့ တစ်သက်စာ မမေ့နိုင်စရာတွေ အပြည့်ဖြစ်နေအောင် သေချာဖန်တီးခဲ့နော်...။
Posted by lay-ma at 3:49 AM 15 comments Links to this post
ဟန်ဆောင်မှု အထပ်ထပ်နဲ့ 
ရေနဲ့ဆေးပစ်လိုက် …။
အလိမ်အညာတွေနဲ့ပုပ်အဲ့နံစော်နေတဲ့
နင့်ပါးစပ်ထဲ spray နဲ့ဖြန်းလိုက်…။
နင့်ရဲ့သွားတွေကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောလိုက် …။
ဖာထေးစပ်ချုပ် ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို
အသစ်တွေနဲ့လဲလိုက် …။
ကဲ.. ပြီး ပြီလား..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၂၀၀၉ လို့ ပြော …
အားလုံးက လက်ခံတယ်…။ ။
လူသားများအားလုံး နှစ်သစ်ဖြစ်တဲ့၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေမယ့် ဟန်ဆောင်မှုမျိုး…၊ သူတစ်ပါး နစ်နာရမယ့် လိမ်ညာမှုမျိုး …၊ သူတစ်ပါး ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဖြစ်တဲ့ အမြတ်ထုတ်မှုမျိုး…တွေကို ရှောင်ရှား ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး.. ဗရမ်းဗတာ စိတ်ကူးတွေ … စနစ်တကျမရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ကို သေသပ်အောင်ပြုပြင်နိုင်ပြီး … ပြီးစလွယ်ပြင်ဆင် အသုံးချနေတဲ့ အမှားတွေ.. နောင်တတွေကို သစ်သော.. ကောင်းသော.. မှန်သော.. အရာများနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် လေးမ ပြုပြင်ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ..။
Posted by lay-ma at 7:45 PM 16 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 7:11 AM 15 comments Links to this post
The Beast ကတော့ Beauty and the Beast က Beast ကိုပြောတာပါ…။ မြန်မာပြန်စာအုပ်တွေမှာ ကိုရုပ်ဆိုးလို့ကိုယ်စားပြုရေးသားထားပေမယ့် လေးမမျက်စိထဲမှာတော့ ခြင်္သေ့ကြီးလို့ ပဲ မြင်ပါတယ်…။ ကိုရုပ်ဆိုးပဲခေါ်ခေါ် .. ခြင်္သေ့ကြီးလို့ ပဲ ပြောပြော.. ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ အောင်ပွဲ ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ the Beast ဖြစ်ပါတယ် …။ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ် … Walt Disney ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် တစ်ပုဒ် … ပုံပြင်စာအုပ်တွေထဲမှာ အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် … ဖြစ်တဲ့ Beauty and the Beast ကို လူတိုင်းလိုလို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ…။ အဖိုးတန် နှင်းဆီတစ်ပွင့်အတွက်နဲ့တောအုပ်ထဲက ကြမ်းတမ်းပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သားရဲကောင်ကြီးရဲ့ ... ရဲတိုက်အိုကြီးမှာ လာနေရတဲ့ မိန်းမလှလေး နဲ့သားရဲကောင်ကြီးတို့မေတ္တာသက်ဝင်သွားကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by lay-ma at 3:30 AM 10 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 9:45 PM 16 comments Links to this post
Tag မှ ပို့ စ်တင်တယ်လို့ပြောရင်လည်း ခံရတော့မှာပဲ …။ ပို့ စ်တင်ရင် Tag Game ကို အရင်တင်တယ်လို့ပြောရင်လည်း ကျေနပ်လျက်ပါပဲ…။ အဆက်ပြတ်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့ စ်တင်ဖို့စဉ်းစားမိတာနဲ့မောင်မျိုး ရေးခိုင်းထားတာကို အရင်ရေးမိတယ်…။ အကြိုက်ဆုံးကဗျာ … ။
ခုချိန်ထိ လေးမ ဖတ်ဖူးတဲ့ ကဗျာ .. နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာတွေ တော်တော်များပါတယ်… ။ ခုထိအာရုံထဲမှာ စွဲနေတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးကဗျာအဖြစ် ရွေးချယ် လိုက်ပါတယ်…။
လို့“ ယသော်ဓယာ” ရဲ့ ခံစားချက်ကို ကိုမျိုးဦးဥာဏ်က ဖွဲ့ သီထားတဲ့ “ ယသော်ဓယာ တမ်းချင်း”ပါ..။
ရာဟုကိုထွေးလို့ အိပ်ဟန်ဆောင်ခဲ့ရတယ်… တဲ့…။
မျက်စိထဲမှာ ဗုဒ္ဓ၀င် စာအုပ်ထဲက သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား တောထွက်ခါနီး ခန်းစည်းလေးလှပ်ပြီး ယသော်ဓယာကို ကြည့်နေတဲ့ ပုံလေး… ယသော်ဓယာက ကျောခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးကို မြင်ယောင်မိတယ်…။ ခြေဆွဲလို့တားချင်လည်း ဘယ်ရမလဲ…။ မာရ်နတ်တောင် တားလို့ မရတာ… မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယသော်ဓယာက သားလေးပွေ့ ပြီး အိပ်ဟန်ယောင်ဆောင်ရုံပဲ စွမ်းနိုင်ရှာ မပေါ့ ….။
အကြိုက်ဆုံးစာသား… စွဲနေတဲ့ စာသားလေးက ….
ကောင်းလိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်း… စကားလုံး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့အင်မတန် အသက်ဝင်တယ်…။ ခင်ပွန်းသည် တောထွက်တရားကျင့်တာကို တငိုငိုတရယ်ရယ်နဲ့လွမ်းပြနေလို့ဖြစ်မလား…။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ လွမ်းရှာမှာပဲ…။ လင်ပစ်တဲ့ နန်းမတော်တဲ့…။ နန်းမတော်ကြီးဆိုတာ အင်မတန် မက်မောစရာ နေရာပဲ… ချမ်းသာပြည့်စုံ…သြဇာကြီးလို့မက်မော အားကျစရာ အနေအထားပေမယ့်… ယသောဓယာကတော့ လင်ပစ်တဲ့ နန်းမတော်ပါတဲ့…။ လင်ယောက်ျားရဲ့ ချစ်ခင်ဂရုစိုက်… ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုခံရတဲ့ သာမန် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့တောင် မယှဉ်ဝံ့တော့အောင် ခံစားနေရတဲ့ နန်းမတော်ကြီး လို့လေးမ ခံစားရပါတယ်….။
လေးမ ငယ်ငယ်ကတည်းက ယသော်ဓယာကို မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကဗျာကို အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ်…။ အပေါ်မှာရေးထားတာတွေက ကဗျာဖတ်ပြီး လေးမရဲ့ အမြင်ပါ…။ လေးမရဲ့ တစ်ဖက်သတ်အတွေးနဲ့ကဗျာဆရာရဲ့ မူရင်း ခံစားချက်.. ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲချော်ခဲ့သည်ရှိသော် ခွင့်လွတ်ပါ…။
နောက်ဆုံး ရလိုက်တဲ့ အသိကတော့… လောကကောင်းကျိုးအတွက်… စတေးခဲ့ရတဲ့ နှလုံးသားတွေကို မှတ်တမ်းတင်သင့်တယ်.. ဆိုတဲ့ အသိပါပဲ…။ ။
ရောင်မဲ့ ကိုယ်ပွားငယ်စူးနဲ့တွယ်လို့ အကျွန်ပဲသိတယ်….
ယှဉ်တွဲနှစ်ကိုယ် နန်းရိပ်ခိုလို့ ပျော်ခွင့် (၁၃)ရာသီက
သံယောဇဉ် အသင်္ချေ မမြင်နေစေတော့သခင်
ပစ္စုပ္ပန်မေတ္တာရဲ့ ငဲ့ကွက်တဲ့ နှုတ်ဆက်အနမ်းကို
ခွန်းမသနိုင်တဲ့ ရိုင်းကြမ္မာငင် အံကြိတ်ရင်ခွင်
ရဲသွေးယို ခြေလှမ်းနဲ့ ဖ၀ါးထပ်ချပ်လိုက်ချင်တယ်…
တရိပ်ခို သယမ္ဘူလွတ်ကြောင်းကို
ဒွေးတော်အနမ်း အမောင်တမ်းသလို သွေးတော်ကိုဖြစ်ခံနိုင်ဘူး
ဆန္ဒတော်မျိုသိပ်လျက်နဲ့ တိတ်တိတ်လေး ကျန်ခဲ့ရတယ်..
အပါးက သာဓုခေါ်ခွင့်မရတာ တစ်သက်တာမျှမချိဘူးမောင် ။
Posted by lay-ma at 2:04 AM 8 comments Links to this post